Wiilwaal – dhugasho
haddisabdi Nofeembar 21, 2016 taariikh
Waxaa jiray boqor Soomaaliyeed oo caan ahaa oo ka talin jiray degaanka Jigjiga caasimadda u tahay. Waxaa boqorkaa la odhan jiray Garaad Wiilwaal wuxuuna ahaa nin aragti soofaysan, aftahanimo, iyo hogaamin aad u heersarraysa Alle weyne ku manaysatay. Wuxuu dagaal galaa-bixin jiray niman Galla ah oo uu dhul badan ka furtay. Wuxuu ahaa nin weedhiisu ka socoto deegaanka u dhexeeya Herar iyo Jigjiga iyo dhulalka dariska la ah. Colaad iyo nabadgelyaba wuxuu ahaa hormuud Soomaaliyi ku dhaarato gabyaa culusna ah. Saldano taam ah iyo tol aad u tanaaday oo xoog badan markii uu isku hubsaday ayuu is cajabiyey oo wuxuu isku qanciyey inaan Bartire nin la aragti ah ama kusoo dhaw ku jirin.